Nepalistudio » ट्वीटर चलाउनु हुन्छ ? साबधान कारबाहिमा पर्नुहाेला…… ट्वीटर चलाउनु हुन्छ ? साबधान कारबाहिमा पर्नुहाेला…… – Nepalistudio
ट्वीटर चलाउनु हुन्छ ? साबधान कारबाहिमा पर्नुहाेला……
ट्वीटरमा कसैकोविरुद्धमा अफवाह फैलाउने, कसैलाई गालीगलौज गर्ने तथा धार्मिक भावनामाथि आघात पूराउने जस्ता ट्वीट गर्ने मानिसहरुलाई निस्तेज पार्नका लागि ट्वीटरले महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ ।
सोही क्रममा ट्वीटरले अब यस्ता नकारात्मक ट्वीटहरुबाट चर्चा बटुल्नेहरुको ट्वीटर अकाउन्ट अस्थायी वा स्थायी रुपमै बन्द गरिदिन सक्नेछ । ट्वीटरले हामै कमाल आर खान नामक एक ट्विटर प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट बन्द गरिदिएको छ । आपत्तिजनक ट्वीटका सन्दर्भमा ट्वीटरले पछिल्ला दिनमा नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ ।
अकाउन्ट बन्द गरिसकेपछि ट्वीटरले रजिस्टर्ड फोन नम्बर वा इमेलमा प्रयोगकर्तालाई पहिचान प्रमाणित गर्न भन्दछ । सधैका लागि अकाउन्ट बन्द गरेसँगै ट्वीटर रजिस्टर्ड नम्बर वा इमेलमा त्यसको जानकारी दिन्छ । यदि सोही नम्बर वा मेल आइडीबाट अर्को कुनै ट्वीटर अकाउन्ट खोलेमा त्यसलाई पनि बन्द गरिदिन्छ ।
सधैका लागि बन्द हुनसक्छ अकाउन्ट
१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार प्रकाशित